Tae-kwon-do ITF: hampiofana eto Madagasikara i Nicolas (Ra Gonz) | NewsMada
Tae-kwon-do ITF: hampiofana eto Madagasikara i Nicolas (Ra Gonz)
Par Taratra sur 18/07/2018
Ho avy eto Madagasikara, ny volana aogositra ho avy izao, Randriamindrisoa Nicolas de Gonzague (Ra Gonz), ilay Malagasy mpiangaly ny taranja tae-kwon-do, mipetraka any Frantsa. Araka ny fandaharam-potoany, hisy fiofanana homeny ho an’ny mpitsara, ny
8 ka hatramin’ny 10 aogositra ho avy izao, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Ny federasiona malagasy no tomponantoka amin’ity fivahiniany ity.
Hizara telo ny fampiofanana: ny «stage d’arbitrage kyourigi», ny «stage technique” eo amin’ny “Poomsae” ary ny «stage juge technique”, eo amin’ny “poomsae” hatrany. Raha tsiahivina, efa manana ny mari-pahaizana sy ny taratasy hahafahana mampiofana i Nicolas (Ra Gonz), izay efa manana ny tempana mainty (5 ème dan). Izy rahateo, efa «juge mondial», amin’ny “Poomsae”.
Efa tao anaty ekipam-pirenena malagasy ny tenany tamin’ny fotoan’androny ary efa niaro ny voninahi-pirenena, tamin’ireo fiadiana ny ho tompondaka eran-tany samihafa. Betsaka ihany koa ireo fiofanana efa natrehiny. Manomboka amin’ny 8 ora – 12ora ny maraina, raha amin’ny 2 ora – 4 ora tolakandro kosa ny tapany hariva.